Ikhiphedi enezinkinobho ze-LED - I-Apple Patent entsha | TeraNews.net
Ikhiphedi enezinkinobho ze-LED - I-Apple Patent entsha
umbhali Nikitin Eugenius Kushicilelwe ku 03.01.2021
Kuyamangaza ukuthi amaShayina awakucabanganga ngalokhu, othengisa izinto ezingabizi kakhulu ze-PC emhlabeni wonke. Ngemuva kwakho konke, izigidi zabathengi zithenge amakhibhodi ama-Chinese ngama-hieroglyphs ezitolo eziku-inthanethi. Bese-ke - babumba izitika ngolimi lokufaka oludingekayo. Ikhibhodi enezinkinobho ze-LED iyi-patent entsha ye-Apple. Kulula kakhulu ukwenza amakhulukhulu ezikwele ze-LED ngokwezifiso. Futhi uwafake kuzinkinobho zekhibhodi. Futhi, uma okuphathelene nemingcele yama-PC kungabazeka, kuma-laptops isixazululo esinjalo asicabangi njengokufuna.
I-patent uqobo ifaka ngaphezu kokukhanyisa kwenkinobho ye-LED. Isekela ukuthinta okuningi, impendulo yengcindezi nempendulo ethintekayo. Kuhle lokho. Cabanga nge-laptop enabo bonke lobu buchwepheshe noma ikhibhodi yokudlala. Kakade manje ngifuna ukuthenga igajethi enjalo, ngiyenzele ngokwezifiso futhi ngijabulele zonke izinzuzo zekhulu lama-21.
Njengoba ikhulelwe abasunguli be-Apple Corporation, ukhiye ngamunye kuzoba isikrini se-LCD esincane. Kungaba yi-OLED, isibonelo. Noma ubuchwepheshe obufanayo. Izinkinobho kufanele zibe sobala. Lokhu kusho ukuthi isisekelo sezinkinobho ingilazi, i-ceramics noma isafire.
Ngubani odinga ikhibhodi enezinkinobho ze-LED
Kuyacaca ukuthi engxenyeni yesabelomali kulula ukufaka izitika kukhiye. Kepha engxenyeni emaphakathi neye-premium, isisombululo sizozitholela uhlelo lokusebenza.
Abantu abangaboni kahle bangenza izinhlamvu zibe zinkulu. Noma shintsha umbala we-backlight. Ngendlela, ukulungiselelwa kokugcina sekuvele kusetshenziswe ngenkuthalo emhlabeni wonke - amakhibhodi abuyiselwe emuva, ngokwesibonelo.
Akunasidingo sokwenza ama-laptops ezifundeni ezithile. IsiLatin, isiCyrillic, ama-hieroglyphs - umnikazi uqobo uzibekela ikhibhodi oyifunayo.
Emidlalweni, ungakhetha okhiye bokulawula. Kuze kube seqophelweni lokuthi ufake isithombe esibonisa ukusebenza kwenkinobho.
Okufanayo kungenziwa kubaklami, abahleli bezinhlelo nabantu abasebenza ngokuqukethwe kwezithombe namavidiyo.
Ikhiphedi enezinkinobho ze-LED iyisinyathelo esizayo. Uma wenza konke kahle, ungathola umphumela omuhle. Uma ucabanga ngesipiliyoni sika-Apple ekukhiqizeni ubuchwepheshe bekhompyutha, nakanjani ngeke kube khona amaphutha. Umhlaba maduze uzobona amakhibhodi amasha emakethe bese uwahambisa.
Kunokuphutha okukodwa kwale patent. AmaShayina angahle athole izijeziso uma enikeza izixazululo ezishibhile ngezinkinobho ze-LED emakethe yazo. Okusho ukuthi, ngumkhiqizo we-Apple kuphela ozoba nekhibhodi enjalo, futhi intengo yayo izolunga. Kuzohlala okuqukethwe ngokudlala kuphela izinqumo imikhiqizo engathi sína yaseTaiwan.